Qaamuuska Af-Soomaaliga (G. Diz. Somalo Monolingue)
Home > Qaamuuska Af-Soomaaliga (G. Diz. Somalo Monolingue)
Autori: Puglielli, Annarita; Mansuur, Cabdalla Cumar
(GRANDE DIZIONARIO SOMALO MONOLINGUE)
Qaamuuskan oo miririhiisu yahay hawl ay qabteen dad badan oo khubara ah wuxuu waxtar weyn u leeyahay daraasaadka ereyada af soomaaliga (Somali lexicography); waxuu kaloo muhim u yahay midaynta af soomaaliga (Somali standardization), maadaama afkan waqti aan fogayn uun noqday af qoran (1972). Waxaa qaamuuska dhammaadkiisa lagu lifaaqay sifayn kooban oo ku saabsaan naxwaha af - soomaaliga, oo loogu talaggalay in uu waxtar u yeesho adeegsiga qaamuuska.
Maaddada cilmi-afeedka ayay bare sare ka ahayd Jaamacadda Roma 1 "La Sapienza", kaddid waxay u soo wareegtay Jaamacadda Roma Tre oo markaas la aasaasay. Waxay xubin ka ahayd Guddigii Farsamada ee u qaabilsanaa qaybta luqadaha ee Jaamacaddii Ummadda Soomaaliyeed intii u dhexaysey sanadihii 1977 ilaa 1990. Waxay ku guulaysatay in Jaamacadda Roma Tre manhajkeeda uu ka mid noqdo maado u gaar ah afka iyo suugaanta soomaaliyeed. Waxay isla jaamacaddaas gudaheeda ka hirgelisay dhismaha Xarunta Cilmibaaarista Soomaaliyeed (Centro Studi Somali) oo iyadu ay madax ka tahay. Waxay soo saartay qoraallo fara badan oo ku saabsan af-soomaaliga, waxay kaloo madax ka ahayd soo saaariddii laba qaamuus oo waaweyn oo af-soomaaliga ku saabsan oo kala ah: Qaamuus Somali-Talyani (1985) iyo Qaamuus Talyaani-Soomaali (1998).
Oo takhasuskiisu yahay cilmiga luqadaha iyo dhaqanka wuxuu bare sare ka ahaa Jaamacaddii Ummadda Soomaaliyeed muddadii u dhexaysey 1976-1990, gaar ahaan maaddada Kushitistigga ayuu ka dhigaayay kulliyaddii luqadaha. Isla muddadaas wuxuu madax ka ahaa waaxdii af taliyaaniga, waaxdaasoo ardayda jaamacadda soo gasha oo idil lagu diyaarin jirey inta aysan kulliyadaha kala duwan u kala gudbin. Wixii ka dambeeyay 1990kii dalka talyaaniga ayuu u wareegey, halkaas ayuuna ka sii waday cilmibaaristii soomaaliyeed isagoo la shaqaynaaya aqoonyahannadii ay horay u wada hayeen hawshaas, ilaa haatanna sidii ayey u wada shaqeeyaan. Wuxuu xubin ka yahay Xarunta Cilmibaarista Soomaaliyeed. Jaamcadda Roma Tre. ayuu dhowr iyo toban sano ka ahaa bare sare oo dhiga luqadda carabiga. Wuxuu qoray qoraallo badan oo ku saabsan afka iyo dhaqanka soomaaliyeed.
Qaamuuska Af-Soomaaliga - Grande Dizionario Somalo